Sida loo Kala Apple Noocyada kala duwan ee iPhone iyo iPad
> Resource > Apps > Sida loo Kala Noocyada kala duwan ee iPhone iyo iPad
iPhone, iPad waa weyn wax soo saarka Apple, oo ay dunida oo ay dhab ahaantii bedelay qaar ka mid ah siyaabaha weyn. Iyada oo ay design warshadaha gaar ah, oo ay tahay shaqooyinka fanka in qof kasta uu doonayo in ay leeyihiin. Laakiin, hal dhibaato awgood waa in ay isu ekaatay wax badan in aan si dhib leh u sheegi kara waxa iPhone ama waxa iPad aan heysano. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iphone Mac Data Recovery) horay qoyska oo dhan iPhone taageertaa , iPad iyo iPod Touch, waana waajib in ay u sheeg farqiga u dhexeeya daydo kala duwan ee iPhone iyo iPod taabto.
Qaybta 1. Sida loo Kala iPhone 4s ka iPhone 4
Qaybta 2. Sida loo sheeg farqiga u dhexeeya iPhone 4 (GSM) iyo iPhone 4 (CDMA)
Qaybta 3. iPad 2 vs IPad cusub (iPad 3) vs. iPad bandhigay isha (iPad 4)
Siri u iPhone 4s
Habka ugu sahlan iPhone 4 sheeg ka iPhone 4s waa in iPhone 4s uu leeyahay shaqo ee Siri, halka iPhone 4 ma aha. Sidaas fadlan marka hore hubi iPhone u Siri, haddii maxaad og tahay hadii ay tahay iPhone 4 ama iPhone 4s. Ka sokow, si ay jab J5 cusub mahad, iPhone 4s waa dareemi snappier oo dhaqso.
The iPhone 4 GSM had iyo jeer doonaa saxaarad SIM kaar ah. Saxaarad SIM waxay ku taalaa dhinaca midigta ah ee bartamihii jir-. Iyo haa tahay, waxaa jira line madow dhow hooseysa, laakiin waa u eg in dhammaan iPhone ka.
Mid ka mid ah isbedel yar ee design noqon lahaa meelaynta badhannada dhabarta tagay. Sida ka muuqata sawirka la barbardhigo, iPhone 4s ah 'button carrab iyo furayaasha mugga waa la kiciyey oo keliya waxoogaa yar. Waa wax farqi hal daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha ilaaliya in ay leeyihiin, kuwaas oo furan button kooban 4 iPhone ma laga yaabaa in ay daruuri tahay haboon version cusub.
Inkasta oo aanay jirin kala duwanaansho weyn oo u dhexeeya labada qalabka. The diffences ee hardware ayaa weli caan ah sida aad ka arki kartaa image soo socda.
Hadda Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows & Mac) taageertaa iPhone 4 labada (GSM) iyo iPhone 4 (CDMA)
Dad badan ayaa ku weydiin sababta Wondershare Dr.Fone ma taageeri iPhone ay, oo ay isticmaalayso iPhone 4, ma iPhone 4s. Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) taageertaa iPhone 4, aan? Jawaabtu waa haa. Waagii hore Dr.Fone taageertaa kaliya iPhone 4 GSM, laakiin hadda Wondershare Dr.Fone taageertaa labada iPhone 4 GSM iyo iPhone 4 CDMA. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doonaysid in aad hubiso iPhone haddii ay la iPhone 4 GSM ama iPhone 4 CDMA. Waxaad ku hubin kartaa sida ay talooyin hoose.
Sidee baan u sheegi farqiga u dhexeeya ah iPhone 4 GSM iyo CDMA iPhone 4 ah?
Waxaa jira laba kala duwan muuqda oo u dhexeeya iPhone 4 GSM iyo iPhone 4 CDMA. Mid ka mid ah waa saxaarad SIM ah iyo kuwa kale ee ku saabsan tahay line madow ku iPhone ee jirka.
Fiiri ku biraha bartamihii jir-. Ma jiraa line madow ku xusan mugga & buttons carrab? Hadda, ma jirtaa saxaarad SIM ah dhanka midig ka mid ah bartamaha loox-? Kuwani waa waxyaabaha uu ka eegi.
Iyada oo aanu jirin saxaarad SIM on 4 iPhone CDMA, oo waxaad arki doontaa model this on jiraan 2 khadadka madow ku yaala dusha sare ee jir bartamaha labada dhinac iyo bidix xaq, taas oo ka duwan iPhone 4 GSM.
Badan oo ku saabsan iPhone 4 GSM iyo iPhone CDMA
iPhone 4 GSM - The version iPhone 4 GSM waxaa ay bixiyaan sidayaal adduunka oo idil. Sidayaasha in bixisaa iPhone 4 model GSM waxaa ka mid ah AT & T, Rogers, Vodafone, iyo T-mobile.
iPhone 4 CDMA - The iPhone 4 CDMA markii hore la sii daayay oo ay Verizon oo markii dambe ay bixiyaan qaran ka hor la sii daayo 4s iPhone. Labada Verizon & qaran weli bixiyo model iPhone 4 CDMA.
Waa mid aad u fudud in ay iPad 1 iyo iPad mini sheeg ka muuqaalka, halka ee tusaalayaal kale oo iPad, waa wax sidaas u fudud si ay u kala soocaan. Halkan, aynu wadaagno qaar ka mid ah talooyin aad gacan ka kala iPad 2, iPad cusub iyo iPad bandhigay isha.
Sida loo sheegi iPad bandhigay isha (iPad 4) ka iPad cusub (iPad 3) & iPad 2
1. Siri oo keliya oo ay la socdaan iPad bandhigay isha
In qoyska iPad ah, kaliya iPad mini iyo iPad bandhigay isha leeyihiin Siri, kaas oo aad codkaaga u isticmaali kartaa in baaq loo diro, xusuusinta set, iyo in ka badan. iPad 2 iyo iPad cusub? Waxaa jira ma aha. Sidaa darteed, in la kala saaro aad iPad bandhigay isha ee ka iPad 2 iyo iPad cusub, tani waa sida ugu fiican oo fudud.
2. xirayaasha, mid gaar ah iPad bandhigay isha
Laga soo bilaabo xirayaasha ama dekedaha isku xira, waxaa sidoo kale aad u sahlan in la kala saaro iPad bandhigay isha ee ka iPad 2 iyo iPad cusub. Hubi farqiga u sida image hoos ku qoran.
Sida loo sheegi iPad 2 ka iPad cusub (iPad 3)
1. Kaameerada kala duwan ee size
Tani waa hagaajinta kale oo weyn 3 iPad (cusub iPad). Ayaa kaamirooyinka ee iPad 2 kaliya yihiin oo kali ah waxaa, halka kaamirada iSight ee model 2012 waa arrin wanaagsan. Laga soo bilaabo baaxadda kaamirooyinka, waxaad si fudud u sheegi kartaa iPad 2 ka iPad cusub. Qiyaastay caliper vernier ah, dhexroor camera ee iPad 2 waa 5.5mm, halka iPad cusub ee waa 6.9mm. Waxaa jira farqi u ah 1.4mm dhexroor. Just hubi farqiga u socda sawirka.
2. Voice yeerin (Ma Siri)
Voice yeerin, walaalkiis yar ee Siri waa badhan cusub oo ku saabsan keyboard ka jidaynayey u yeerin cod. Waxaa turjumi karaa waxa aad dhihi ereyo. Si aad u kala saaro cusub iPad ka iPad 2, kaliya waxa ay hubiyaan keyboard ah. Haddii aad ka arki kartaa, waa iPad cusub (iPad 3) ee gacanta haatan.
Kala iPad Noocyada kala duwan ka Model Number
Noocyada kala duwan ee iPad leeyihiin model tirooyin kala duwan, ka dib markii model tirada gaarka ah ee taxanaha iPad yihiin. Waxaad ka eegi kartaa tusaale tiro ka dambe ee iPad.
1 Tirada model ah iPad asalka (iPad 1) waa A1219 iyo A1337.
2 Tirada model ah iPad 2 waa A1395, A1396, iyo A1397.
3 Lambarada model ah iPad cusub (iPad 3) waa A1416, A1403 iyo A1430.
4 Tirada model ah iPad la isha Display (iPad 4) waa A1458, A1459 iyo A 1460.